Home » Creative Writing » ၂၀၀၈ နဲ့​နာဂစ်အတွေ့အကြုံ
အဲဒီဥပဒေကို မဲပေးရတုန်းကလည်း ဘာမှန်းမသိဘူး.. ခုထိလည်း ဘာမှန်းမသိကြဘူး.. သူတို့သိတာ သူ့တို့ဘဝကို ဘယ်လိုနလန်ပြန်ထူရမလဲဆိုတာပဲ. သူတို့ဘဝက အဲဒီဥပဒေနဲ့ သက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာလည်း လုံးဝမသိဘူး…
်စာရေးကောင်းတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါ အရီးရေ..
တန်ဖိုးရှိတဲ့ အတွေ့အကြုံပါပဲ လုံမလေးရေ။
အတော် တရားရစရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေလည်း အများကြီး ထပ်ကြုံခဲ့ပါသေးတယ်.. လူ့စိတ်တွေအကြောင်း… သိပ်ကို ပျက်စီးနေတဲ့ လူ့စိတ်တွေ အကြောင်းပေါ့ မမကြီးရယ်…
ဟုတ်တယ် နာဂစ်ဟာ ပြည်သူတွေအတွက်တော့ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုတွေကိုပေးတယ် ဒါပေမဲ့ အာဏာရှင်တွေအတွက်တော့ ခြေဥကို အတည်ပြုနိုင်ပီး အခုထိ ဒီမိုကရေစီအတုနဲ့ ပြည်သူတွေကို အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့တာပဲ
အစိုးရက ကိုယ့်ကို ဥပေက္ခာပြုခဲ့မှန်းတောင် မသိနိုင်တဲ့ ပြည်သူတွေရယ်ပါ…
နာဂစ်နဲ့ နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ မတွေ့လိုက်ပေမည့်…
ခုတော့ ဓမ္မာရုံလှူမယ်ဆိုရင် အားပေးမိတယ်.. အူးလေး စာကို ဖတ်ပြီးကတည်းကပဲ..
ဟုတ်တယ်.. ကိုယ်က မြင်နေရတော့ အတော်လေး စိတ်မကောင်းတာ… နာဂစ်ကတည်းက ပျက်စီးသွားတဲ့ လယ်တွေနဲ့ ကျဆင်းသွားတဲ့ဘဝတွေ အခုထိ ပြန်မထနိုင်သေးတာတွေ အများကြီး ရှိနေတယ်..
.အမတို့လည်း အိမ်နောက်ပိုင်း ပြို သွားတယ်။ သရက်ပင်လဲကျလို့။ အခုထိ အဲဒါကို ပြန်ကောင်းအောင် မဆောက်နိုင်သေးဘူး။ နာဂစ်ဒဏ်ကနေ တစ်တိုင်းပြည်လုံးနီးပါး ပြန်နာလံမထူနိုင်သေးပါဘူးနော်။ ဒီခြေဥ ကြီး ကို မရှင်းနိုင်သေးသရွေ့ပေါ့။
ဟုတ်တယ် အစ်မ… နာဂစ်ကဖျက်… ဥပဒေတွေကဖျက်နဲ့.. နောက်ပိုင်း ဆန်ကိုတောင် ပြည်ပက တင်သွင်းရမယ် ထင်ရဲ့.. တောင်သူတွေ ရှားကုန်ပြီ.. ကိုယ်တွေ့ရယ်…
နာဂစ်​က နဖူး​တွေ့ဒူး​တွေ့ မကြုံလိုက်​ရ​ပေမဲ့ DVD ထဲမှာ​တော့ ​တော်​​တော်​​ကြောက်​စရာ​ကောင်းတာပဲ ။ နာဂစ်​နဲ့ ပတ်​သက်​ပြီး နာမယ်​ကြီးတဲ့ အထဲမှာ ဦးထွန်းလွင်​လဲပါတာ​ပေါ့ ။ နဂိုလ်​က သူ့သတိမထားမိကြဘူး ။ နာဂစ်​ပြီးမှ သူ့ကို ဂရုစိုက်​မိကြတာ​လေ ။
​အော်​​မေ့လို့ ၂၀၀၈ နာဂစ်​ဖြစ်​တုန်းက ၁၈ နှစ်​မပြည့်​​သေးဘူးဆိုတာ ပါးပါး​လေး ​ကျော်​ညာသွားတယ်​ ။ ​တော်​ပါ​ပေ့
အဟွတ်.. သများက ကြုံတိုင်း ကြော်ငြာဝင်တယ်…
ဟုတ်တယ်.. အခုဆို ဒီဘက်က လူတွေက ရေဒီယိုတို့. မိုးလေဝသ သတင်းတို့​ နားထောင်တတ်နေပြီ…
အသေထွက်ပဲ ထွက်မယ်တဲ့.. :-(
ကျ​နော်​ နာဂစ်​ ကြူံပြီး သိပ်​မကြာ
နာဂစ်​က ကျုပ်​ကို ရုပ်​ပိုင်းဆိုင်​ရာ သိပ်​မထိခိုက်​​ပေမယ့်​ စိတ်​ပိုင်းဆိုင်​ရာ​တော့ အ​ပြောင်းလဲကြီး​ပြောင်းလဲသွား​စေခဲ့တဲ့ ဖြစ်​ရပ်​ပါ
ရေးပါဦး အူးဂီ… အနော်တို့လည်း သိနေကြားနေရတာတွေ အများကြီး. များလွန်းလို့တောင် မမှတ်မိချင်တော့ဘူး.. နာဂစ်ကောင်းမှု အကြောင်းပြုပြီး ချမ်းသာသွားသူများ အကြောင်းပေါ့…
အခုထိ.. နာဂစ်အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်တွေဆောက်… နာမယ်တွေထိုး.. ၀မ်းနည်းကြသူ..အမှတ်တရရှိကြသူ.. နောင်မဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေးနိုင်သူ… အလည်အပါတ်လာသူ.. လေ့လာသူတွေအတွက်.. တိုးရစ်ဇင်အတွက်.. ဘာသာရေးမနွယ်တဲ့နေရာတခုတောင် မဆောက်ထားနိုင်တာကိုတော့.. အံ့သြမိ….။
ဒါဟာ.. သေသွားသူတွေ.. ဘ၀နဲ့ရင်းပေးသွားတယ်ယူဆလို့ရမယ့်.. အမွေ..၀င်ငွေပဲ..။
ဒီတစ်ခါ မိတင်တွေ ဘာတွေ ရှိရင် ပြောကြည့်ရမား..
နာဂစ်တုန်းက ဒေးဒရဲဘက်ကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုပြီး သွားလှူဖူးတယ်..။
အနှစ် ခြောက်၇ာ.. မမြင်ဘာ..။ ။
ပျက်စီးသွားတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေလေ… အဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ကိုယ့်ကျင့်တရားတွေပေါ့.. ကိုယ့်မျိုးဆက်ကိုပဲ လက်ဆင့်မကမ်းမိအောင် ကြိုးစားရတော့မယ်…
.စက်လှေ ငှားခ ဈေးကြီးတာက ဒီလို။ နာဂစ်မှာ အလောင်းဆွဲပြီး ရွှေဖြုတ်တဲ့လူတွေ ရှိတယ်လေ။ မအူပင်ကနေ အုပ်လိုက်သွားကြတာ။ တစ်ယောက်ကို ၅၀သား ၁ပိသာ လောက်ထိ ရကြတယ်။ အလောင်းတွေက ပုပ်ပွနေပြီဆိုတော့ နားဂတ်တွေ ဘာတွေ ဖြုတ်ရတာ လွယ်လွယ်လေး။ ဒါပေမယ့် အနံ့မခံနိုင်တာရော၊ သရဲကလည်း အရမ်းခြောက်တယ်။ အဲဒါတွေကြောင့် သတ္တိကောင်းတဲ့လူတွေပဲ များများ ရခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ရွှေဖြုတ်သွားတဲ့လူတွေ နဲ့ မှားသွားလို့ စက်လှေခ ဈေးကြီးတာ နေမှာပါ။။
ရွာတွေဘက်မှာဆို လယ်ကွင်းတွေထဲကနေ ကယ်ပါယူပါ အသံတွေ ကြားနေရတယ်တဲ့… အတော်ကြာကြာအထိပဲ… ပရိတ်တရားတွေရွတ်ရတယ်တဲ့…
ကြားဖူးဒါ… သင်္ဘောမြုတ်တော့ မြစ်ထဲ လှေနဲ့သွားပီး မကယ်ဘဲ ရေထဲကနေ လှေပေါ်တက်လာတဲ့လက်ကို ဓါးနဲ့ခုတ်ပီး လက်ကောက်၊ လက်စွပ် ယူသဒဲ့…
ယက်စ်… အဲဒီသတင်း မှန်အိ..သူ့အသက်ထက် ကိုယ့်အသက်ရှင်ဖို့က ပိုတန်ဖိုးရှိတာကိုး…
ခု​နောက်​ပိုင်း သဘာဝ​ဘေး​တွေ မြင်​​ရ ကြားရ ဖတ်​ရတိုင်း
အဲ့တုန်းက စိတ်ပေ်ါက်ပေါက်နဲ့ ကန့်ကွက်မဲတွေ တတိုင်းပြည်လုံး ထည့်ကြလည်းးးးး
မဲကို.. သွားကိုမပေးတာလို့.. ထင်တယ်..။
နာဂစ်ကြောင့် ရွာတွေပျက်နေချိန်မှာ ဘယ်သူမှ မဲမထည့်နိုင်ကြဘူးလေ.. ဘယ်သူတွေကရော သွားထည့်ချင်စိတ်ရှိလိမ့်မလဲ… အသည်းကြားက မဲတစ်ပြားရဲ့ တန်ဖိုးက ခုချိန်ထိ သက်ရောက်နေတော့ကာ…
ဘယ်သူတွေ ထည့်ချင်စိတ် ရှိသည်ဖြစ်စေ..မရှိသည်ဖြစ်စေ…
တခဲနက်ကြီးကို ထောက်ခံခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ ရလဒ်ပဲ… အော်ကျယ်အော်ကျယ်…
.နာဂစ်တုန်းက ပဲခူးကစက်ရုံမှာ…ဓါတ်တိုင်တွေလဲ သစ်ပင်တွေလဲ မီးတွေပျက်